अर्थ Archives - NepalTrending
प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि धर्मराएको सेयर बजार अर्थमन्त्रीको वाचापछि सुधारतर्फ !
NepalTrending — December 15, 2021 add comment
काठमान्डौं । गत साता नेपाली सेयर बजारमा निकै उतारचढाव देखा पर्यो । यसको खास कारण चाहिँ विभिन्न दलका नेताहरुले दिएको यसबारेको अभिव्यक्ति थियो । हो, बजारमा देखिएको स्वभाविक परिवर्तनले यसलाई असर त...	Read more »
शेयर बजार झन्डै १७ अङ्कले बढ्यो, सात अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको कारोबार
NepalTrending — November 17, 2021 add comment
काठमाण्डाै – शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधवार पनि बढेको छ । नेप्से आज १६ दशमलव ९५ अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय एक दशमलव ५२ विन्दुमा पुगको छ। आज बैंक, व्यापार,...	Read more »
२ करोड ६६ लाख बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्दै उपकार लघुवित्त !
NepalTrending — October 17, 2021 add comment
काठमान्डौं । उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । उपकार लघुवित्तले सर्वसाधणहरुलाई २ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ६६ हजार २५० कित्ता शेयर निष्काशन गर्नेछ...	Read more »
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन, तपाईंले भर्नुभो ?
NepalTrending — September 30, 2021 add comment
काठमाडौं । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन हो । कम्पनीले असोज ११ गतेदेखि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गरेको थियो...	Read more »
सञ्चयकर्ताको पैसालाई कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ : मन्त्री जनार्दन शर्मा
काठमाण्डौ । कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानीयोग्य परियोजनाहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभएको छ । कोषको ६० औँ वार्षिकोत्सव समारोहको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो...	Read more »
देशकै पहिलो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ! जसले एक महिना नहुँदै राज्यको ३७ अर्ब २० करोड बचाउए
काठमाडौँ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाउँदै तथा वितरण तथा छुट सुविधा बढाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन...	Read more »
चडपर्व नजिकिए संगै राष्ट्र बैंकले बाँड्न थाल्यो नयाँ नोट !
काठमाडौं । कोरोना महामारिको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी २१ असोजमा पर्ने घटस्थापनाको दिनबाट सुरु हुने दसैंका लागि अहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नोट उपलब्ध गराएको छ ।...	Read more »
तेह्रथुम पावरको आईपीओले कति पाउला ओपनिङ्ग रेञ्ज ?
NepalTrending — September 12, 2021 add comment
काठमान्डौं । तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले भदौ ९ गते, बुधबारबाट भदौ १३ गते, आइतबारसम्म निष्कासन गरेको साधारण सेयर (आईपीओ) को बाँडफाँड भदौ २५ गते, शुक्रबार भइसकेको छ । कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँड भएपछि...	Read more »
रिदी हाइड्रोपावरको सर्वाधिक कित्ता खरिद बिक्री, प्रतिकित्ताको मुल्य कति पुग्यो ?
NepalTrending — September 9, 2021 add comment
काठमाडौं । आज कारोबारको अन्तिम दिन (बिहीबार) कारोबार खुलेको करिब साढे १ घण्टामा रिदी हाइड्रोपावरको सर्वाधिक कित्ता खरिद बिक्री भएको छ । सो अवधीसम्म कम्पनीको १ लाख ९३ हजार ४२४ कित्ता शेयर...	Read more »
सानिमा लाइफको शेयरमुल्य ४९७ पुग्यो, ५ लाख बढी कित्ता खरिदमाग हुदाँ बिक्रीमाग शून्य !
काठमाडौं । बुधवार बजार खुलेको पौने एक घण्टामा सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्यमा सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४९७.४० पुगेको छ ।...	Read more »